Wararka Maanta: Arbaco, Jan 2 , 2013-Kenya oo Qalalaasaha ka taagan degmada Gaarisa ku eedeysay Ciidammo ka Tirsanaa Dowladdii hore ee Soomaaliya
Guddoomiyaha degmada Gaarisa, Maxamed Macallin ayaa sheegay in rabshadahaas ay ka dambeeyaan dhallinyaro u dhashay dalka Kenya oo ka mid noqday ciidamada dowladda Soomaaliya tababarrana ku qaatay Kenya inay mas'uul ka yihiin falalka ammaan-xumo ee ka dhacaya Gaarisa oo ah xarunta gobolka Soomaalida-Kenya degaan.
"Ciidcamadaan waxay tababarro ku qaateen gudaha Kenya si ay qayb uga qaataan dadaallo ay dowladda Kenya ku doonaysay inay ku taageerto dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya, kuwaasoo lagula dagaalamayay Al-shabaab," ayuu yiri Macallin oo la hadlayay wargeyska The Daily Nation.
Sidoo kale, Macallin wuxuu sheegay in dhalliyaradaas ay ku adkaatay inay sii dagaalamaan ayna dib ugu laabteen Kenya iyagoo hubaysan, isagoo xusay inay dhallinyaradaas qabaan tababarro heer sare ah ayna iyagu yihiin kuwa ka dambeeya dhibaatada Gaarisa ka taagan.
Magaalada Gaarisa ayaa waxaa tan iyo sannadkii hore ka dhacayay rabshado ay ka mid yihiin qaraxyo, weerarro iyo toogasho toos ah oo lala beegsanayo ciidamada iyo kaniisadaha ku yaalla magaalada gaarisa, waxaana dhammaadkii sannadii hore lagu dilay magaaladaas 11 askari oo sideed ka mid ah ay ahaayeen booliis iyo saddex ka mid ahaa milateriga Kenya.
Saraakiisha ciidamada dalka Kenya ayaa ku eedeeyay weerarradii ka dhacay dalka Kenya sida degmada Gaarisa iyo Nairobi inay ka dambeysay Al-shabaab, laakiinse hadalka guddoomiyaha degmada Gaarisa ayaa taas meesha ka saaraya.
Xarakada Al-shabaab ayaan marna qiran inay mas'uul ka tahay weerarro ka dhacay Gaarisa iyo deegaanada kale ee dalka Kenya, balse iskama fogeyn, waxaana Kenya gudaha Soomaaliya kaga sugan ciidammo qayb ka ah howgalka AMISOM oo dagaal kula jira Al-shabaab.